लकडाउनमा कागतीका बोटसंग रमाउँदै नेता थापा केएल बुढाथोकी – नेपाली संगसार
Home कृषि लकडाउनमा कागतीका बोटसंग रमाउँदै नेता थापा केएल बुढाथोकी
कृषि नेपाली संगसार	· June 7, 2021 ·0Comment
दाङ । घरको उत्तरतिर ३ कठ्ठा जग्गामा कागतीको मनोरम बगैंचा छ । लहरै रोपिएका सर्लक्क बढेर झुम्म परेका बोटहरुमा फूल र फल पनि उत्तिकै छन् । हरियाली एवं मोहक कागती बगैंचामा सिर्सिरे बतासले गजवको माधुर्यता थप्छ ।
घोराही १७ गुलरिया निवासी राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता सुरेश थापा लकडाउनको यो सकसमय समयमा कागती बगैंचामा रमाउँदै दिनहरु बिताइरहेका छन् । भन्छन् ” फूल र फल लागेका कागती बगैंचामा टहल्दा आनन्द अनुभूति हुन्छ । शरीरमा एक किसिमको उर्जा र पुनर्ताजगी पैदा हुन्छ ।”
कोरोना कहरसंगै जब पहिलोपटक देशमा लकडाउन शुरु भयो जिल्ला बाहिर रहेका नेता थापा घर आए र कागतीका बिरुवा स्याहार्न थाले । थापा भन्छन् “गत वर्षको लकडाउनमा बल्ल मैले कागतीका विरुवा स्याहार्न पाएँ । मल र औषधि हालेर गोडमेल गरें । त्यसपछि बल्ल कागती सप्रिए ।”
वि. सं. २०४६ पछि राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेता थापा यो वर्षको लकडाउनमा फेरि आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट घर फर्किएका छन् र फेरि कागती खेतीको स्याहारमा जुटेका छन् । शुरुका वर्षहरुमा त्यति राम्रा नभएका कागतीका बोट अहिले रहर लाग्दा भएका छन् । प्राय: सबै बोटहरुमा फल लागेका छन् । कागतीको व्यवसायिक खेती गर्ने योजना विस्तारै मूर्त बन्दै गएकोमा नेता थापा केहीहदसम्म संतुष्ट र रोमान्चित देखिन्छन् ।
आफ्नो अनुभव र केही सोधखोजले नेता थापाले अब कागती खेतीबारे धेरै ज्ञान हासिल गरिसकेका छन् । कागती खेतीबारेअब उनमा थप जाँगर र उत्साह बढेको छ । उनी लगत्तै थप दुई कठ्ठामा कागती रोप्दैछन् । ” खाल्डा खनेर तयार गरिसकेको छु । अब केही दिनमै बिरुवा रोप्ने तयारीमा छु ।” नेता थापाले भने ।